ब्लगर बेदनाथका आफ्नै कुरा
ब्लगरका कुराकानी प्रस्तुत गर्ने क्रममा यस पटक ब्लगर बेदनाथ पूलामीलाई दौंतरीमा निम्ताएका छौं। "आफ्नै कुरा "नामक ब्लग लेख्नुहुने बेदनाथ जीको इमेलद्वारा तयार पारिएको कुराकानी प्रस्तुत गर्दैछौं।:
१) ब्लग यात्रा कसरी शुरू गर्नु भयो ?
नमस्कार मेरा सबै ब्लगर मित्रहरु, पाठक र सुभचिन्तकहरुमा !
रहरै रहरमा नजानिँदो तरिकाले ब्लगको शुरुवात गरिन पुगिएछ ! जति वेला धनकुटाको मित्र टिका जी ले वेब बनाउनु न, मलाइ त अलिक पारा आएन भनेर Blogger.com को लिंक दिनु भो, उति वेला hi5.com र facebook जस्तो एउटा सामाजिक संजाल मात्र होला भन्ने लागेको थियो र रजिष्टर मात्र गरे ! उहालाई पनि त्यो लिंक उहाको साथीले दिनु भएको रहेछ व्यक्तिगत वेब बनाउनु भनेर ! जब
मैले ब्लग एउटा फ्री वेब पेज हो भन्ने थाहा पाएपछी र ब्लगमित्रहरुको हौसला पाए पछी भने यसको नशा नै लाग्यो ! अनि नजानिदो रुपमै भए’नी मेरो ब्लगको यात्रा शुरु भो ........"पाइलटको बाटोमा धुलो उडाउदै’’ !